फेरि आयो दोलखा भिमसेनलाई पसिनाः अनिष्ट हुने डरले थालियो यस्तो कठोर पुजा! – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > फेरि आयो दोलखा भिमसेनलाई पसिनाः अनिष्ट हुने डरले थालियो यस्तो कठोर पुजा!
admin February 21, 2020 धर्म सँस्कृति	0
चरिकोटमा रहेको सुप्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिरका चमत्कार देखिएको छ । यहाँ देवता भीमसेनलाई १७ औं पटक पसिना आएको छ । भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा अनिष्ट वा शुभ हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ । आज बिहान ६ बजेर २८ मिनेटदेखि ७ बजेर २५ मिनेटसम्म एकघण्टा पसिना आएको बताइएको छ । भीमेश्वर मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले १७ औं पटक पसिना आएको जानकारी दिनुभयो ।
भीमेश्वरको शिलाको दायाँबायाँ दुवै भागबाट पसिना आएको उहाँले जानकारी गराउँनुभयो । दायाँ पट्टिबाट पसिना आउँदा राजापक्षलाई र बायाँपट्टिबाट पसिना आउँदा जनतालाई अनिष्ठ हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ । भीमेश्वरको शिलामा पसिना आएपछि मन्दिर व्यवस्थापन तथा गुठियारले स्थानीयरुपमा क्षमा पूजा अर्चना गरेका छन् ।
थप क्षमा पूजाका लागि शिलामा आएको पसिना पुछेको रुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा गृहमन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । राजाको पालामा पसिना आउँदा भने राजदरबाट क्षमा पूजाको लागि पञ्चवुली पठाउने चलन थियो ।
विगतमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको एक महिनाअघि, तत्कालिन राजा विरेन्द्र बं’श ना’श हुनुभन्दा करिब डेढ महिना अघि र १९९० सालको भूकम्प आउनुभन्दाअघि भीमेश्वरलाई पसिना आएको बताइन्छ । २०७४ असोज १० गते आएको पसिनापछि देशमा स्थानीय तह र संघीय नेपालमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ ।